musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vaccine kushanya: Zvakanaka here, zvakaipa kana kusava nehanya?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kunonoka kwenguva refu kana kushomeka kwejekiseni reECVID-19 mune dzimwe nyika kuri kutungamira vashanyi kuenda kune dzimwe nzvimbo.
Vaccine kushanya kunomutsa mibvunzo yekusaenzana kwejekiseni.
Vaccine kushanya kunowedzera kupatsanura pakati pevapfumi nevane rombo shoma.
Vanhu vakapfuma kwazvo munyika dzine hurombo vanokwanisa kuwana mishonga yekudzivirira nekuti vanokwanisa kufamba.
Vaccine yekushanyirwa, uko nzvimbo dzevashanyi ikozvino dzave kupa majekiseni eCOVID-19 pazororo kukwezva vashanyi, ibakatwa rakapetwa kaviri sezvo, nepo ichikwanisa kubatsira kutangazve kwekufamba, inomutsawo mubvunzo wehutano hwevheji sezvo ichawedzera kuwedzera kupatsanurana vapfumi uye vane rombo shoma.
Maindasitiri eQ2 2021 ongororo yevatengi yakawana kuti chete 6% yevapinduri vepasirese havana hanya nezvedambudziko reCOVID-19. 94% yasara yaive 'yakanyanyisa', 'zvishoma' kana 'zvakanyanya' zvine chekuita. Nekunetsekana kwakakwira, mukana wekubaiwa jekiseni wakatorwa nevazhinji. Kunonoka kwenguva refu kana kushomeka kwejekiseni reECVID-19 mune dzimwe nyika kuri kutungamira vashanyi kuenda kune dzimwe nzvimbo.
Vanhu vakapfuma kwazvo munyika dzine hurombo vava kukwanisa kutanga kuwana majekiseni sezvo vachikwanisa kufamba. Izvi zvinomutsa nharo dzekuti nyika dzinokurudzira kushanya kwekudzivirira zvirwere dzinogona kunge dzichipa mishonga yekudzivirira yakawanda pane kupa mukana kuvashanyi vakapfuma.
Chokwadi US inoti, Russia, Maldives, neIndonesia ndidzo dzimwe dzenzvimbo dziri kupa majekiseni evashanyi parizvino. Mamwe masangano ekufamba atora mukana wekusimudzira mapiritsi ekushanyirwa senzira yekuwedzera mari. In Rashiya, semuenzaniso, vhiki-nhatu jekiseni kushanya mapakeji akatemerwa pakati peUS $ 1,500 kusvika US $ 2,500, kusanganisa mutengo weti yetikiti, unosanganisira majekiseni. Nekudaro, nenzvimbo zhinji pasi rese dzichiri kunetsekana nemushonga wekudzivirira wakaderera, izvi zviri kumutsa mubvunzo wekuenzana kwejekiseni.
Zvinoenderana nedatha razvino, Democratic Republic of the Congo yakapa majekiseni mazana matatu pavanhu chiuru kubva musi wa3.5 Nyamavhuvhu 1,000. Izvi zvinojekesa patova nemukana wakakura pakati penyika dzakasiyana, uye vazhinji vari kusiiwa kumashure.
Imwe yakanaka yekudzivirira kwekudzivirira ndeyekuti inogona kutora chikamu mukutangazve kwekufamba mushure mekunge COVID-19 denda raunza chikamu ichi nemabvi. Kusimuka kwepasirese kwepasirese kwakaderera ne -72.5% gore-pamusoro-gore (YoY) uye nzendo dzekumba ne -50.8% YoY, zvinoenderana nedatha yazvino. Izvi zvinoratidza zvakakomba mhedzisiro yedenda uye nei nzvimbo dzepasirese dziri kuda kutanga kwekutanga.